Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka dastuurka oo kullan la yeeshay madaxweyne Gaas (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka dastuurka oo kullan la yeeshay madaxweyne Gaas (SAWIRO)
Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane C/raxmaan Xoosh Jibriil ee haatan ku sugan magaalada Garoowe ayaa halkaasi kullan kula yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane C/weli Maxamed Cali Gaas.
Wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa ugu horeyn madaxweyne Gaas uga mahad-celiyay madaxweyne Gaas soo dhaweeynta heerka sare ah ee ay u sameeyeen wafdiga uu hogaaminayo ee haatan ku sugan magaalada Garoowe.
“Waxa aan kaaga mahad-celinayaa soo dhaweeynta wanaagsan ee aad noo sameeyseen, waana mid nagu dhiira-gelineysa inaan kusoo noqono magaaladaan” Sidaas waxaa yiri wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil.
Sidoo kale, wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil iyo madaxweyne Gaas ayaa kawada hadlay sidii loo xoojin lahaa wada-shaqeynta ka dhaxeeysa wasaaradda iyo dowlad goboleedka Puntland.
“Waan ognahay doorkii wanaagsanaa ee ay Puntland kasoo qaadatay geedi-socodkii ansixinta dastuurka qabyada ah ee la ansixiyay 1-da August ee 2012, hadana waxaan idinka rajeyneynaa kaalintii shalay mid kasii fiican inaad ka qaadataan ololaha dib u eegista dastuurka, taasoo ku suurtageli karta inaynu xoojino wadashaqeynta inaga dhaxeeysa” Ayuu hadalkiisa raaciyay Wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa wafdiga wasiirka uga mahad-celiyay booqashadooda ay ku yimaadeen Puntland, wuxuu wasiir Xoosh iyo dhamaan shaqaalaha wasaaradda ku ammaanay sida dardarta leh ee ay kuwadaan howlaha wasaaradda.
Ugu dambeyn, madaxweyne Gaas ayaa ku ballan-qaaday in Puntland ay qeyb lixaad leh ka qaadan doonto hannaanka dib u eegista dastuurka dalka oo haatan ah mid aan weli dhameystirnayn.